nhau - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
| zhizha rasvika, rega titore machira akanaka!
Mazuva mashoma apfuura, munhu &quot;kunzwa kwakadzikaquotmp;quot; mask kubva kuUniqlo akakwezva vanhu, kukonzera iyo Nyika yese kuti ive pamzere kuti itenge. Ichokwadi kuti masks ave chinhu chinofanira-kuva chefashoni chinhu chekuti vanhu vabude pasi pe ...
Super isina-kutsvedza bionic akacheka shangu
Shangu dzinoita basa rakakosha muhupenyu hwevanhu. Pamusoro pekuchengetedza uye kuchengetedza kudziya, shangu dzinofanira kuve nerimwe basa rakakosha -- anti-slip ....
Magetsi ganda rinogadzirisa basa idzva, kwete kungodzima moto chete, asiwo zvinogona kuvhundutsa!
Nekukurumidza kukurumidza kwekuchinjika kwemidziyo inogona kupfeka, Ganda remagetsi rinova chinhu chakakosha chevanhu-komputa kugarisana, uye kuchengetedzeka kwayo kunova kwakanyanya. Uchishandisa masilika eprotein epasi uye calcium ion seyakaomeswa mat ...
Zero-simba smart & quot; pedyo-yakakodzera mhepo inonamira & quot;, kudziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha zvipfeko hakuchizve kurota
Kupisa kwemuviri wemunhu kunoendeswa kubva kune wega wekupinda mukati meganda, uyezve inotsinhaniswa nenzvimbo dzakapoteredza kuburikidza nezvipfeko, kuitira kuti ichengetedze yakasimba yekudziya yemagetsi mumuviri wemunhu. saka, chave chokwadi ...
Ndeapi anoshanda eanoano kuvharwa ekushandiswa kwemachira?
Kuwedzerwa kweanoparticles kunogona kugadzirisa mashandiro ejira echinyakare kana kugadzirira zvitsva zvinoshanda zvekupfeka nano. Iyo itsva inoshanda nano machira inogona kupa micheka mabasa akanaka uye anoshandiswa zvakanyanya mukudhinda kwemachira uye dyein ...
Technical post | jira refaira rekushandisa pakurapa
Optical fiber (&quot; fiber yemaziso &ampquott;kwenguva pfupi) yave ichizivikanwa chaizvo seye opical waveguide chishandiso. Kunze kwekutaurirana, ndezvipi zvinoshandiswa zve optical fiber mumunda wekurapa?...
Tekinoroji yekusimudzira uye maitiro ekuvandudza kweiyo denim
Chipfeko cheDenim chave chakakurumbira kubvira pakuzvarwa, nekuda kwemafashoni ayo uye kupfeka kwekunyaradza uye nepasirese. parizvino, nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwevanhu kurarama, Chipfeko chemombe chakagadzirwa nejeko readhimasi jira ...
Yunivhesiti yesainzi uye tekinoroji yeChina (ustc) yakagadzira biomimetic chimiro chezvinhu chechiedza, yakakwirira simba uye yakasimba nano cellulose
Kubva kuberekwa kwehupfumi hwevanhu, zvinhu zvave zviri hwaro hwebudiriro yemagariro nekufambira mberi. Zvigadziriso zvinhu simbi, ceramics uye ma polymers ndiwo anonyanya kushandiswa pazvinhu zvese zviripo. Munguva ichangopfuura ...
Zvidzidzo zveunyanzvi zvinokuudza kana maski N95 anogona kushandiswazve mushure mekurwisa hutachiona? Ndeipi nzira yekuuraya hutachiona yakanyanya kunaka?
Kuendeswa kweAerosol ndiyo imwe nzira yekuparadzira neino coronavirus. Kana murwere achirwara, anotsvedza, kana kutaura kana kufema, vanoparadzira hutachiona inotakura micron-sized aerosols mumhepo. Mazhinji madiki maeerosols anoramba arimo mairi ...
Ndedzipi tsika dzekushandisa dzekupfeka dzakangwara mumunda wehondo?
Zvipfeko zvinehungwaru zvakasikwa zvakasanganiswa nemirayiridzo yakawanda yakaita seyemicheka uye zvipfeko, sainzi yezvinhu, kunzwa kwehunyanzvi, kugadzirisa kweruzivo, tekinoroji yekutaurirana uye huchenjeri hwekuziva. Mune milit ...
musha pashure 1 2 3 4 5 6 NextLast - Total 57 1 zvinyorwa Current peji muunganidzwaal 6 10 pa peji